Home विविध योग किन, कसरी र कसले गर्ने ?
२०७४, १ माघ सोमबार १७:३७
स्वस्थ्य खानपान र अनुशासित जीवनशैलीसंगै योगलाई जीवनको एउटा हिस्सा बनाउनुपर्ने जोड दिए । बदलिँदो जीवनशैली, गलत खानपानले मानिसहरू विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुने गरेको बताउँदै योग साधनालाई हरेक दिन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तेस्रो राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा बेनी नगरपालिका, जिल्ला आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्र र नविन आनन्द योग केन्द्रले बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले योगले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फाईदा हुने भएकाले पनि योगको महत्वका बारेमा सहर देखी गाउँसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
स्वस्थ्य, निरोगी, दीर्घजीवि कसरी हुने ? यसको सबैभन्दा सरल र प्राकृतिक विधी हो, योग । न हामी उपचार गरेर निरोगी हुन्छौं, न औषधी सेवन गरेर नै । यद्यपी स्वस्थ्य खानपान र अनुशासित जीवनशैलीसँगै योगलाई जीवनको एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ, जसले हामीलाई निरोगी, जवान, उर्जावान् बनाउँछ । भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले विभिन्न सञ्चारमाध्यमद्वारा योगको प्रचार-प्रसार सुरु गरेसँगै नेपालमा पनि योगप्रति मानिसहरुको मोह बढ्न थालेको हो । योगले आत्मालाई परामात्मासित जोड्छ ।
यस अर्थमा योग सबैका लागि हो । योगलाई उपयोग गरेर सबैका लागि उपयोगी तथा सहयोगी बन्ने सक्ने भएकाले पनि योग आवश्यक छ ।योगमा जम्मा ८ आसन हुन्छ । त्यसमा याम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, त्याग पर्दछ । योगा त्यसमध्यको एउटा आसन हो ।
त्यसबाहेक, सूर्य नमस्कार सबैले गर्न मिल्ने आसन हो । सूर्य नमस्कारमा जम्मा १२ वटा आसन हुन्छ ।सबै आसन गर्न भ्याएन भने पनि सूर्य नमस्कारका १२ वटा आसन र केहीबेर प्राणायम गरेमा मात्र पनि शरीर स्वस्थ्य रहन्छ ।
नेपालमा मानिसहरु विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन् । पहिले पहिले रासायनिक मल थिएन, खानामा विषादिको प्रयोग थिएन, जसले गर्दा खाना स्वस्थ्य थियो । अर्को कुरा त्यतिबेला यातायातको सुविधा र्थिन । मानिसहरु श्रम गर्थे । खानपान राम्रो थियो, जसले गर्दा उनीहरुलाई रोग लाग्दैनथ्यो ।
Previous articleकालीगण्डकीमा मकर सङ्क्रान्ति स्नान गर्नेको भीड
Next articleम्याग्दीका मगर समुदायले माघेसङ्क्रान्ति पर्व मनाए (फोटो फिचर)